U Diyaarinta Sawiradaada Shabakada: Talooyin iyo Farsamooyin | Martech Zone
Haddii aad wax u qorto baloog, maareyso degel, ama aad u dirto codsiyada isku xirka bulshada sida Facebook ama Twitter, sawir qaadistu waxay u badan tahay inay qayb muhiim ah ka tahay qulqulkaaga. Waxa laga yaabo inaadan ogeyn waa inaysan jirin qormooyin sawir gacmeed ah ama qaab muuqaal ah oo ka samaysan kara sawir diirran. Dhinaca kale, sawir fiiqan oo cad ayaa hagaajin doona dadka isticmaala? aragtidaada ka kooban waxyaabahaaga iyo hagaajinta muuqaalka guud iyo dareenka boggaaga ama bartaada internetka.
At Wax barasho Waxaan waqti badan ku qaadannaa diyaarinta sawirrada dadka kale ee websaydhka, sidaa darteed halkan waxaa ku yaal tilmaamayaal deg deg ah oo aan kusoo qaadnay intii aan jidka ku sii jirnay.
Fadlan ogow: tilmaamaha farsamada ee hoos ku xusan waxaa loola jeedaa Adobe Photoshop CS4. Waxaa jira barnaamijyo kale oo qaban kara isla hawshaas, marka haddii aadan fursad u helin Photoshop fadlan hubi dukumintiyada caawimaadda ee barnaamijkaaga wax ka beddelka sawirkaaga si aad u aragto haddii aad farsamooyinkan fulin karto.
Dib u habeyn & Isku hagaajin
Marar badan u diyaarinta sawir loogu talagalay websaydhkaaga ama bartaada ayaa kuu baahan inaad ka dhigto mid yar, gaar ahaan haddii ay ka imanayso kamarad dijitaal ah oo badan. Waa muhiim in la ogaado in dhimista cabbirka ay ka dhigan tahay hoos u dhigid faahfaahsan, sida Photoshop uu yahay 'mushing'? wada jir pixels deriska ah si ay ugu haboonaato sawirka cabirkiisa cusub; tani waxay siinaysaa sawirka muuqaal indho sarcaad ah.
Si loo been abuurto? faahfaahinta aad lumisay waa inaad adeegsataa miiraha Maaskaro-xumada (Filter> Unsharp Mask). Weligaa ha ilaawin magaca ka soo horjeedka ah - Maaskarada Unsharp dhab ahaantii way fiiqdaa!
Waxaad ogaan kartaa sida ay u cadyihiin uguna dhawaaqeen faahfaahintu Jaantuska 2 hoose.
Kontaroolada sanduuqa wadahadalka ee loo yaqaan 'Unsharp Mask' ayaa laga yaabaa inay u muuqdaan kuwo cabsi leh, laakiin warka wanaagsan ee ku saabsan diyaarinta sawirrada shabakadda ayaa ah inaadan wax aad u badan ku qasin. Waxaan helaa qaddar ah 50%, Radius of .5, and a Threshold of 0 ayaa shaqeeya inta badan waqtiga oo dhan.
Sawirro Dalagyo Macno ahaan
Xaaladaha qaarkood, waxaad u baahan kartaa inaad sameysid taxaddar yar oo yar yar oo isku xiraya nooc weyn oo sawir ah. Xaaladaha guud ee tan waxaa ka mid ah qolalka sawirada ama cinwaannada wararka oo leh nooca thumbnail ee sawir weyn.
Markaad yareynayso sawirka cabbirka yar yar, isku day inaad sawirka ugu soo koobto waxyaabaha muhiimka u ah ka hor intaadan cabbirin. Tani waxay u oggolaaneysaa dadka isticmaala inay fahmaan nuxurka iyo macnaha sawirka xitaa haddii ay yihiin cabbirro yar yar.
Jaantuska 1 waa sawir si toos ah loogu miisaamay cabbirkiisa thumbnail, laakiin Jaantuska 2 ayaa la galiyay waxyaabaha ugu muhiimsan ee sawirka. Tani waxay u oggolaaneysaa dadka isticmaala inay si dhakhso leh u fahmaan waxa sawirku isku dayayo inuu la xiriiro kuna dhiirrigeliyo inay gujiyaan wixii macluumaad dheeraad ah.
Muuqaalka sawirku waa midabkiisa midabkiisu xoog badan yahay. Sawirada hoose, maqaarka midabkiisu wuu u egyahay jirro cirkuna wuxuu u egyahay cawl iyo caajis. Si nolosha qaar loogu daro sawiradaada, Photoshop CS4 waxay leedahay shaandho aan kugula taliyo oo la yiraahdo Vibrance.
Haddii aad rabto inaad si dhakhso leh nolol ugu keento sawirkaaga caajiska isku day kuwa soo socda:
Kudar lakab isku hagaajin cusub (Lakabka> Lakabka Habeynta Cusub> Vibrance)
Kordhinta gariirka gariirka (Jaantuska 2) gudaha guddiga hagaajinta ayaa xoojin doona midabka iyadoo la ilaalinayo midabada maqaarka (ka hortagaya inay u ekaadaan midab aad u liita). Muraayadda Saturation-ka waxay yeelan doontaa saameyn la mid ah, laakiin waxay beddeli doontaa sawirka oo dhan, oo ay ku jiraan midabada maqaarka.
Tilmaamahan ayaa ah cirifka ugu dambeeya ee barafka marka la eego sifooyinka hodanka ah iyo kuwa xoogga leh ee Photoshop uu ku bixiyo sixitaanka iyo tayaynta sawir qaadista. Fadlan qoraal ku bixi faallooyinka haddii ay jiraan farsamooyin kale oo aad jeclaan lahayd inaad sharaxdo.
Tags: Adobe Photoshop cs4dalaggasawirada dalaggafilterImagedalagga sawirkaqaabaynta sawiradasawirsawirphotoshopPhotoshop cs4maaskaro unsharpshaashadda maaskaro unsharpgariirkalakabka gariirka